ရှိလာတဲ့တစ်နေ့သောဖိုင်ဘာဆက်မောင်းကဲ့သို့ဖြစ်ကြ၏ရှာတွေ့ဖို့ခဲယဉ်းအဖြစ် ၅။၂၅ ရွည္ရွည္ေမောင်းကြသည်။ အသစ်အက်စ်ဘီခေတ်ကြွလာ!
WinToFlash ဖွယ်ရှိသည်ကြီးမားတဲ့ခြားနားချက်ကိုဖြစ်ဖို့နည်းလမ်းသင်အလုပ်။ ထိုသို့ဖြစ်စေမည်အသက်တာအများကြီးပိုမိုလွယ်ကူသင်တို့အဘို့အ။
မြန်မြန်ဆန်ဆန်နဲ့ရိုးရိုးတပ်ဆင်အစီအစဉ်လိုအပ်ချက်များကိုပြီးနောက်အချိန်အတွက်အားလုံးမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုရှာတွေ့ပါလိမ့်မယ်အရေးအသားအက်ဆေးများအပေါ်ပြတင်းပေါက်နှင့်အသုံးပြုခြင်းသင့်ရဲ့အပြောင်း။ အ WinToFlash ကိုအလုပ်လုပ်ရတဲ့အခမဲ့အဘို့။
လည်း၊WinToFlash လိုက်သည်။ အဘယ်သူမျှမပေးဆောင်ဖို့လိုအပ်မှာအားလုံးအတွက်နေအိမ်နှင့်ဝါသနာအသုံးပြုမှုသည်!
WinToFlash ကိုဖန်တီးနိုင်အပြောင်းအအက်စ်ဘီနှင့်အတူမည်သည့်ခေတ်သစ်ပြတင်းပေါက်တော့ခ်နှင့်ဆာဗာမိသားစု။ မည်သည့်ဒေါသအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်-အိမ်ကနေအဆုံးစွန်၊၃၂ သို့မဟုတ် ၆၄။
WinToFlash အလွန်အစွမ်းထက်သည်ပြတင်းပေါက်မှသွားဖန်ဆင်းရှင်ကိုတပ်ဆင်ရန်နှင့်ပြေးအပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ပြတင်းပေါက်လည်ပတ်ရေးစနစ်တစ်ခုအပေါ်ပြင်ပအပြောင်းပတ္သားသို့မဟုတ်အစဥ်ကြိုးစား။ WinToFlash ကိုဖန်တီးနိုင်ပြတင်းပေါက်များသွားစဥ်အက်စ်ဘီမောင်းမှမည်သည့်ပြတင်းပေါက်များဗားရှင်း/တည်းဖြတ်ခြင်း၊ပင်ကနေတရားဝင်မှီ။
ဘယ်လိုအကြောင်း ၅ မတူညီတဲ့ပြတင်းပေါက်ဗားရှင်း၊တိုက်ရိုက် linux ကို၊အော့ဖ်ဗိုင်းရပ်နှင့်ပြန်လည်ထူထောင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ CD ပေါ်တစ်ခုတည်းအပြောင်းယူအက်စ်ဘီမောင်း? ပြဿနာတစ်ခုမဟုတ်မှာအားလုံး! ယခုသင်ဖန်တီးနိုင်ပါတယ် Multiboot စဥ်အက်စ်ဘီနှင့်အတူန့်အသတ်အရေအစဥ်ပစ္စည်းများအပေါ်ယူအက်စ်ဘီမောင်း။ WinToFlash Multiboot ကိုထောက်ခံပါတယ်ဆိုမှပြတင်းပေါက်ကျယ်ရန်ပြတင်းပေါက် ၁၀။
ပိုင်ဆိုင်လျှင်အစဉ်အသစ်နဲ့ခေတ်မီအဆင့်မြှင့်တင်ရန်အစား BIOS၊WinToFlash ကိုဖန်တီးလိမ့်မည်အပြောင်းအအက်စ်ဘီနှင့်အတူအားလုံးဖိုင်များကိုသင်လိုအပ်တိပေးနဲ့။
ဟုတ်ပါတယ်၊အဘယ်သူမျှမကပိုအနက္ေရာင္ဆိုႏိုင္ေပြတင်းပေါက်နှင့်အဆင်မပြေဆော့ဗ်ဝဲသင်လိုအပ်လျှင်အ bootloader ကိုတပ်ဆင်ထား။ WinToFlash တပ်ဆင်နိုင်သည်ဒါကြောင့်အလိုအလျှောက်ပဲရွေးချယ်ပါ GRUB၄DOS အတိပေးချိန်ခွင်စာမျက်နှာလျှင်၊စံရန်ပျက်ကွက်ဝန်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာ။
WinToFlash များအားကွန်တိန်နာဖိုင်များ:ရုပ်ပုံများနှင့်မော်ကွန်း။ အဘယ်သူမျှမလိုအပ်တောင်တစ်မောင်းသို့မဟုတ်ဖြည်ကိုယ်တိုင်သူတို့ကို။ လျှင်နှင့်အတူစမ်းသပ်နေတယ်ပြတင်းပေါက်တည်ဆောက်ခြင်းနှင့်ချင်ကြပါဘူးအတြင္းကို/စာတိုက်တိုင်းအချိန်သင်စမ်းသပ်ရုံစု၏အရင်းအမြစ်ဖိုင်၏ဖိုင်တွဲများနှင့်စာနယ်ဇင်းစတင်။
အချို့ motherboards လိုအပ်အဟောင်းစတိုင်ထုတ်လက်နက်အစီအစဉ်၊WinToFlash ဖန်တီးပေးလိမ့်မည်သင်တို့အဘို့အပြောင်းနှင့်အတူအက်စ်ဘီ-ဒေါ့စ်သာတခဏ။ မိတ္တူသင့်လက်နက်အစီအစဉ်ကိုသင့်ရဲ့အပြောင်းယူအက်စ်ဘီ၊reboot နှင့်မီးေ၏။
FAT၁၆၊FAT၃၂၊NTFS၊exFAT နဲ့ CHS နှင့်ဖြေရှင်း LBA
သုံး FAT၁၆ CHS အတွက်အဆင့်မြင့်ည့္ခလျှင်၊သင့်ရဲ့ဘုတ်ရန်ပျက်ကွက်တိပေးဖွင့်ယူအက်စ်ဘီမောင်းနှင့်အတူ FAT၃၂ ပြတင်းပေါက်များအလုပ်လုပ်တယ်။ သင်ရှိသည်ရွေးချယ်မှုတစ်ခုအဘို့အကောင်းလိုက်ဖက်မှုနှင့်နာေျ။ ဒဏ်ငွေအတိုင်းအားလုံး၏အဆီရွေးချယ်စရာများသင့်ဝန်ဆောင်မှုမှာလည်း! မဆိုထား၏အရွယ်အစားထားပါ။
အချို့ motherboards တိပေးမည်မဟုတ်သည့်တိုင်အောင်သင်အသုံးပြု CHS ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရာမှာအဘို့အကနျ့နှင့်ဖိုင်စနစ်။ ဒါကြောင့်၊အဘယ်သူမျှမ၊ပြဿနာ၊WinToFlash ဤလုပ်နိုင်!
ဒါဟာအလွန်ခက်ခဲသည်ယနေ့ဝယ်ဖို့ယူအက်စ်ဘီမောင်းထက်လျော့နည်း ၄gb၌စတိုးဆိုင်။ ဒါပေမယ့်သင်လိုအပ်လျှင် ၅၁၂ ပာယူအက်စ်ဘီမောင်းဖို့သတိပေးဟောင်းအိပ်? WinToFlash ကန့်သတ်ထားမည်၏စဥ်အက်စ်ဘီကိုမည်သည့်အရွယ်အစားသင်လိုအပ်။
ပြဿနာများ? နားမလည်နိုင်အမှား? ကြည့်ဖို့အထဲကိုဖိုင်ကို-အဖြေလည်းမရှိ။
လမ်းညွှန်ဖို့အဝီကီစာမျက်နှာနှင့်ဖတ်ရန်အကြောင်း အင်္ဂါ WinToFlash